Farmaajo oo goordhow u baxay safar dibadda ah + Ujeedka | Dalkaan.com
Home Warkii Farmaajo oo goordhow u baxay safar dibadda ah + Ujeedka
Muqdisho ( dalkaan) – Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) ayaa goor dhow ka amba-baxay garoonka Aadan Cadde, isaga oo ku sii jeeda magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya.
Farmaajo iyo wafdigiisa ayaa ka qeyb-galaya caleema saarka ra’iisul wasaare Abiy Axmed oo ka dhacaya magaalada Addis Ababa.
Mas’uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda ayaa kusii sagootiyey garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Muqdisho.
Safarkaan uu Farmaajo ugu baxay Itoobiya ayaa sidoo kale ku soo aadaya iyadoo khilaaf xun oo la xali waayey uu kala dhaxeeyo Ra’iisul Wasaarihiisa Rooble, lamana oga wajiga socdaalka Farmaajo uu u jaheyn doono khilaafka kala dhaxeeya Rooble.
Previous articleBaaritaankii ugu weynaa oo kashifay hantida ay dibedaha dhigteen madaxda caalamka
Next articleSidee lagu xaliyey muranka kuraasta Aqalka Sare ee HirShabeelle ka harsan?
Muqdisho (Caasimada Online) – Sida ay xog ku heshay Caasimada Online, waxaa weli illaa hadda billaaban baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo la tuhmayo...
Algeria oo qaaday tallaabo aysan fileyn Faransiiska oo aargudasho ah (Warbixin)
Neymar oo maqan kulanka Kooxda Paris Saint-Germain ee RB Leipzig